Fizarana nofon-kena mitam-pihavanana nohon’ny Asaramanitra teto anivon’ny Antenimierandoholona – Sénat de Madagascar
Fizarana nofon-kena mitam-pihavanana nohon’ny Asaramanitra teto anivon’ny Antenimierandoholona
June 22, 2018 Landivola CATUCIA
Tsy diso anjara amin’ny fankalazana ny fetim-pirenena ny mpiasan’ny Antenimierandoholona. Amin’izao fahatongavan’ny asaramanitra izao. Vorilanina izy ireo nanotrona ny Filohan’ny Antenimierandoholona Rivo RAKOTOVAO mivady sy ny fianakaviany, ireo Loholon’i Madagasikara notarihin’ny Birao maharitra ary ny Loholona sady Minisitry ny Serasera sy ny Fifandraisana amin’ny Andrim-panjakana Riana Andriamandavy VII.
Izao no natao hoy ny Filoha Rivo Rakotovao dia mba ho nofon-kena mitam-pihavanana sy ahafahan’ny rehetra mifety am-pilaminana amin’izao fankalazana ny fetin’ny 26 jiona izao. Ity fanomezana hoan’ny mpiasa ity moa dia nampahafantarina tamin’ny fomba mangarahara teo anatrehan’ny rehetra ny fandaniana natao taminy : mitotaly 114 tapitrisa iraimbilanja ka ny 50 tapitrisa no avy amin’ny Antenimierandoholona, ny 64 tapitrisa kosa dia avy tamin’ny Filohan’ny Antenimierandoholona mivady.
Mialohan’ny fizarana ny nofon-kena mitam-pihavanana no nandraisan’ny Minisitra Rina Andriamandavy VII izay nisaotra nohon’ny fahatokisana ny tenany ka nametrahana azy ho eo amin’ny andraikitra vaovao sahaniny. Izay marihina fa hisahana rahateo ny fifandraisana amin’ny Andrim-panjakana, lafiny nambarany fa hohamafisiny manokana.
FA androany ihany koa no nampahafantarina ny lehiben’ny fiarovana ny Filoha eto amin’ity Andrim-panjakana ity dia ny colonel RATSIMBAZAFY Rinah Harivelo Erick.